Izindaba - Isivuli seHole, esaziwa nangokuthi amahaha emigodi noma imbobo yesango, kubhekiswa esaheni ekhethekile eyisiyingi yokuchofoza izimbobo eziyindilinga embonini yanamuhla noma kubunjiniyela.
I-Hole opener, eyaziwa nangokuthi ama-hole saw or hole hole, isho isaha ekhethekile eyisiyingi yokwenza imingxunya eyindilinga embonini yanamuhla noma kubunjiniyela.
I-Hole opener, eyaziwa nangokuthi ama-hole saw or hole hole, isho isaha ekhethekile eyisiyingi yokwenza imingxunya eyindilinga embonini yanamuhla noma kubunjiniyela. Kulula ukusebenza, kulula ukuyiphatha, iphephile futhi isetshenziswa kabanzi. Kuyinto elula ukusika imbobo eyindilinga, imbobo eyisikwele, imbobo engunxantathu, umugqa oqondile nejika kunoma iyiphi indawo egobile yethusi, insimbi, insimbi engagqwali, i-plexiglass namanye amapuleti lapho ifakwa kubhola ojwayelekile kagesi.
Ngokobukhulu obuhlukahlukene bemibuthano, ababulali banezindawo ezahlukahlukene nezincazelo. Ngesikhathi esifanayo, ngokusho kokujula kwezimbobo, zihlukaniswe ngohlobo olujwayelekile nohlobo lomthwalo ojulile. Afakwe kugesi wesandla kagesi, umthelela wokubhola, i-rocker drill namanye amathuluzi kagesi.
Kunezinhlobo ezimbili ezivamile:ububanzi obungaguquguquki nobubanzi obuhlukahlukene (uhlobo lwendiza). Isivuli imbobo eguquguqukayo yobubanzi ivame ukusetshenziselwa ukuhlobisa endlini nangaphandle.
I-opener hole hole opener, kukhona uhlobo olujwayelekile, uhlobo lomthelela, uhlobo olupholile ngamanzi, oluhlobo olupholile lwamanzi luvame ukusetshenziselwa ukuvulwa kodonga, ngokusebenza kahle okukhulu nokuvulwa okuhle.
Ngokuya ngezigaba ezibonakalayo:isango lembobo le-bi-metal hole / bi-metal hole, isaha yomgodi we-carbide eqinisekisiwe, imbobo yedayimane. Kusetshenziswa izinto ezahlukahlukene ukusika izinto ezahlukene. Okusetshenziswa kakhulu yi-saw bimetallic. I-carbide enosimende inconyelwa izinto zensimbi eqinile, futhi idayimane inconyelwa ingilazi, i-carbon fiber, izinto zobumba nezinye izinto ezintekenteke.
Izesekeli zokuvula imbobo ikakhulukazi zifaka:isibambo sokweseka, intwasahlobo, ibhridi, njll. isibambo sokwesekela singesezingxenye ezijwayelekile. Isango lomgodi elinobubanzi obuhlukile bomgodi linemininingwane emibili yesibambo sokusekela. Ububanzi bomgodi obuphakathi kuka-14 no-32 mm bunemininingwane eyodwa, kanti ububanzi bomgodi obukhulu kuno-32 mm buncazelo esisodwa.
Izesekeli zembobo yomgodi ikakhulukazi zifaka:isibambo sokweseka, intwasahlobo, ibhridi, njll. isibambo sokwesekela singesezingxenye ezijwayelekile. Isivuli semgodi enobubanzi obuhlukile bomgodi ifakwe imininingwane emibili yesibambo sokusekela. Ububanzi bomgodi obuphakathi kuka-14 no-32 mm bunemininingwane eyodwa, kanti ububanzi bomgodi obukhudlwana kuka-32 mm buncazelo esisodwa.
Ijubane lensimbi uhlobo lwensimbi yensimbi enobulukhuni obuphakeme, ukumelana nokugqoka okuphezulu kanye nokumelana nokushisa okuphezulu. Ijubane lensimbi lisetshenziselwa kakhulu ukwenza onqenqemeni oluncane lomzimba kanye namathuluzi wokusika wensimbi amelana nomthelela, kanye nokushisa okuphezulu okuphethe kanye nokubanda okubandayo okufa ngenxa yenqubo yokusebenza okuhle nenhlanganisela enhle yamandla nobulukhuni.
Isivinini se-steel tapper luhlobo lwethuluzi lokuvula elenziwe ngensimbi enejubane eliphezulu, elisetshenziswa kakhulu ukuvula izimbobo ezingcwecweni zensimbi noma emapayipini. Ingasetshenziselwa imbobo yokubeka isikhungo ngaphambi kokuvula imbobo, bese kuthi ngembobo ye-bi-metal ivule ububanzi obudingekayo bomgodi.
Kunezinhlobo eziningi ze-alloy hole openers. Manje imakethe ihlukaniswe yaba yinsimbi (ejwayelekile) yensimbi encane, (uhlobo olungokoqobo) insimbi engagqwali ekhethekile evulekile evulekile. (ibanga eliphakathi) insimbi ekhethekile engenasici evulekile. (Uhlobo lwebanga eliphakeme) insimbi ekhethekile engenasici evulekile (ukujiya kwepuleti lensimbi kungafinyelela ngaphezu kuka-2cm).
Okwesibili: ukuvulwa komgodi we-bimetallic kusetshenziselwa ukuvula ishidi lensimbi, ukhuni kanye nepuleti lepulasitiki.
Okwesithathu, ukusetshenziswa kwesivuli esivula imbobo yensimbi yesivinini esikhulu kanye ne-alloy tapper kuyafana. Amaphuzu: ezejwayelekile, ibanga eliphakathi, ibanga eliphakeme, ukugaya okugcwele, ibanga lezimboni.
Ekugcineni, i-alloy tapper ilungele ipuleti lensimbi futhi umshini wokushaya ngensimbi enejubane ulungele ipayipi lensimbi.
Insimbi esheshayo ye-6542
Izici: okuqukethwe okuphansi kwe-vanadium (1%) nokuqukethwe okuphezulu kwe-cobalt (8%). I-Cobalt ne-Du zingenza izinhlanganisela zekhabhoni zincibilike kakhulu ku-matrix ngesikhathi sokucisha nokushisa, futhi zisebenzise ukuqina kwe-matrix ephezulu ukwenza ngcono ukumelana nokugqoka.
Ubulukhuni: lolu hlobo lwensimbi enejubane elikhulu lunobulukhuni obuhle, ubulukhuni obushisayo, gqoka ukumelana namandla okugaya. Ubulukhuni bokwelashwa kokushisa bungafinyelela kuma-67-70hrc, kepha kusetshenziswa ezinye izindlela ezikhethekile zokwelapha ukushisa ukuthola ubulukhuni be-67-68hrc, obuthuthukisa ukusebenza kokusika (ikakhulukazi ukusika okuphakathi) futhi kuthuthukise ukuqina komthelela.
Isicelo: insimbi esheshayo ye-cobalt ingenziwa ngezinhlobo ezahlukahlukene zamathuluzi wokusika, angasetshenziswa ukusika okunzima ukwenza izinto zomshini. Ngenxa yokusebenza kwayo okuhle kokugaya, ingenziwa kumathuluzi wokusika ayinkimbinkimbi, asetshenziswa kabanzi emhlabeni. Kodwa-ke, ngenxa yokushoda kwezinsizakusebenza ze-cobalt eChina, intengo yensimbi enejubane eliphezulu iphakeme kakhulu, okuyizikhathi eziphindwe ka-5-8 kunalezo zensimbi ejwayelekile enejubane eliphezulu.
Ukuvikelwa kwemvelo: okokuvikela imvelo, akukho ukungcola.